U-Willa Na Werlasowym Żbyrze eLake Solińskie - I-Airbnb
U-Willa Na Werlasowym Żbyrze eLake Solińskie
Werlas, Województwo podkarpackie, i-Poland
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Maciej
Izivakashi ezithandekayo, sikumema endaweni esanda kuvulwa ese-Werlasowy Żbyrze - inhlonhlo ethuthuke kakhulu ekujuleni kweSolina Lagoon.
I-villa yethu yonyaka wonke itholakala enhliziyweni yezintaba ze-Bieszczady - indawo enhle ezungezwe amatheku abukekayo, amabhishi asendle, amagquma aluhlaza, izimfunda ezinezimbali, amahlathi agcwele amakhowe kanye nechweba elihle. Kuyindawo ekahle yokuphumula, ukudoba, ukuxoxa nemvelo yasendle, ukuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili.
Sinevilla entsha, ewubukhazikhazi ngesitayela sasezintabeni enendawo engu-270 sq m, ezungezwe ihlathi. I-villa inamakhishi amabili ahlome ngokuphelele, okungukuthi umshini wekhofi, umshini wokugeza izitsha, isiqandisi-isiqandisi, iketela, i-toaster, i-blender, i-oven, i-hob, izitsha zokupheka kanye ne-cutlery. I-villa inamagumbi amabili okugezela amakhulu anaphansi okushisa, igumbi lokuhlala elibanzi, igumbi lokudlela kanye namakamelo okulala amahlanu. Ngaphezu kwalokho, igumbi lokuphumula line-TV enkulu engu-75 inch. nokuphumula, lapho futhi abantu ababili bangalala. Isakhiwo sishiswa ngendawo yomlilo enejazi lamanzi elinombono oqondile we-Solińskie Lake kanye nethuba lokuphuma uye endaweni enkulu, ehlukanisiwe. Ikamelo ngalinye line-TV, ama-radiator aphakathi nendawo kanye nokufinyelela kwamahhala kwe-WiFi. I-villa iseduze nolwandle olunesihlabathi. Siphinde sibe nethu indawo yokupaka izimoto mahhala. Ngaphandle, endaweni, kunezindawo zomlilo zamatshe, izihlalo zamadekhi ezinamatafula nezoso. Izakhiwo zisogwini lweLake Solina (kukhona nolwandle olunesihlabathi eduze okungenzeka ukuthi ubhukude echibini). Ngaphezu kwalokho, lesi sikhungo silungele izingane - ingadi yezingane, ene-trampoline nebhokisi lesihlabathi.
Kulo mhlaba omuhle, okuyi-Werlas, unethuba lokuzwa ukuthi ukusondela kwemvelo kukuvumela kanjani ukuthi uphumule futhi uphumule esiphithiphithini sempilo yansuku zonke ngokusebenzisa izinhlobo ezahlukene zezokuvakasha. Indawo futhi iyisibaluli sale ndawo - zonke izindawo okufanele uzibone zitholakala kalula! (Ngesicelo sakho, ukuze uthole imali eyengeziwe, inkomba yendawo emizileni yezintaba).
Izilimi: English, Deutsch, Polski
Hlola ezinye izinketho ezise- Werlas namaphethelo